တောင်ကြာပန်းနှင့်………… | The Mandalay Gazette-Myanmar/Burma News Media Forum Network
My Dear Diary » တောင်ကြာပန်းနှင့်…………	27
Posted by mamanoyar on Jul 16, 2012 in My Dear Diary | 27 comments
မှုန်ပြာရီ မှိုင်းကာမို့မို့ ညို့ညို့ညိုလွင်
တောင်ကြာပန်းတဲ့ တစ်ခါမှမမြင်ဖူးဘူး လှလို့ယူလာတာ
မောင်ပေ says: တောတောင်ရှူခင်းတွေကလှ
water-melon says: ဘယ်ကြောင်သွားဖမ်းမှာလဲတော့
သူက အခုတလော နိုင်ငံရေးနဲ့ခေါင်းရှုပ်နေတာ
အနားလာရင် ကုတ် ကုတ် လွှတ်လို့ :P
Ma Ei says: တောင်ကြာပန်းတဲ့
King of Secrets (Bo Min) says: လှလိုက်တာဗျာ၊ ဘယ်မှာ ၀ယ်လို.ရလဲ
mamanoyar says: နှီးဘုရားမှာ ရောင်းနေတာတွေ့ပါတယ်king of Secrets ရေ
မမ အညာသူ says: ချယ်ရီတွေငိုနေပြီနိုရာလေးရေ………..
etone says: တောင်ကြာပန်းတဲ့ .. တစ်ခါမှ မမြင်ဖူးဘူး မမနိုရာရေ …
သူက ပုတိမ်ငိုဘက်မျိုးနွယ်လား.. ၀ါဆိုပန်းနဲ့လည်း ခပ်ဆင်ဆင်နော် …. အပွင့်ဆင့်ပုံချင်းတူတယ်နော် … ။
ဖွင့်ဖတ်အချွန်လေးတွေကလည်း … အပင်တုလားမှတ်ရတယ် .. လှတယ်နော် … ။ ပန်းတွေကိုကြည့်ရင်း ပန်းအိုးထိုးထားပုံလေးပါမှတ်သွားပြီ …. ကျွန်မက အလှပန်းအိုးထိုးရတာ အရမ်းဝါသနာပါလို့ပါ … ။ သင်တန်းတော့ .. အချိန်ပေးပြီးသွားမတတ်ပေမယ့် .. မျက်စိနဲ့မှတ်ပြီး … အထိမ်းမှတ်ရှိလျှင် ထိုးနေကြမို့ပါ … ။ :D
pooch says: ဟုတ်ပါ့ တုန်တုန်ရေ အမလည်း တခါမှ မမြင်ဖူးဘူး ။ ခုမှ တွေ့ဖူးတယ်။ ဘယ်လိုများ ပေါက်တာပါလိမ့်။ ကန်ထဲမှာပဲ ပေါက်ပြီး ကြာမျိုးကွဲပဲ ထင်ပါရဲ့။
ကိုပေါက်(မန္တလေး) says: လှသနော်…………
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: တကယ့် တောင်ကြာပန်းလားဗျ …
အဲ့ပန်းလေးဂို တောင်မလေး သွားပေးလိုက်ရင်
ဘယ်လို နေမလဲ သိဘူးနော် .. အဟီးးးး :D
minnannawar says: တောင်ကြာပန်းတဲ့လား၊ အလွန်လှပါသည်။ မြင်ရခဲသောပန်းဖြစ်ပါသည်။ မျိုးပွား၍လွယ်ကူပါသလား။ ဘယ်အရပ်ဘယ်ဒေသတွင် ရနိုင်ပါသနည်းသိလိုပါသည်။ ပန်းတိမ်ငိုပန်းကဲ့သို့ အမျိုးအစားဖြစ်ပါသလား။
ဖြစ်နိုင်လျှင်မျိုးရယူလိုပါသည်။ အသေးစိတ်ရှင်းပြနိုင်ပါက ကျေးဇူးအထူးတင်ပါမည်။
mamanoyar says: လေးပေါက်ရောက်ဖူးမှာပါ မေမြို့နားက အနီးစခန်းမှာလေ
ဟုတ်ကဲ့ နိုရာလဲအခုမှ မြင်ဖူးတာပါရှင်
မဂွတ် ထော် says: အရမ်းလှတယ်ကွာပုံလေးတွေ က
ညလေး says: မမနိုရာရဲ.လက်ရာကလည်း…..ကောင်းထှာ….
ko khin kha says: ပန်းတိန်ငိုပန်းတော့ တွေ့ဖူးတယ်၊ အခု တောင်ကြာပန်းတော့ အခုမှတွေ့ဖူးတာ၊
mamanoyar says: မမြင်ဖူးတဲ့ပန်းလေးကိုတင်ရလို့ တကယ်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်
အလင်းဆက် says: အိုး..သိပ်လှတာပဲ..ဗျာ။
ရှုခင်းတွေလည်း..လှ..တယ် ။ မမနိုရာကရော…
metallic says: လှလိုက်တဲ့ပန်းလေး
TTNU says: နိုရာရေ..
mamanoyar says: ဟုတ်ကဲ့ ကူးလို့ရပါတယ်ရှင်
ရှင်းသန့် နွယ် says: မမနိုရာရေ တောင်ကြာပန်းလေးကိုအရမ်းသဘောကျပါတယ်
mamanoyar says: အင်း ရှင်းသန့်ကလွမ်းစရာရှိတယ်ထင်တယ်နော်
ဟဲဟဲ ရှင်းသန့်ရေ လာကြည့်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်
နိုရာ့ပုံလေးကို လာကြည့်ပေးတဲ့သူအားလုံး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်
သားဦးမြေးဦး၊ ၀မ်းတွင်းရူး says: တခါမှ မြင်လဲ မမြင်ဖူး၊ကြားလဲ မကြားဖူးသော ပန်းပါဗျာ။
Shwe Ei says: Wow ! (ရွာသူနာမည်မဟုတ် အံ့သြလွန်းလို့ ထွက်လာသော အသံဖြစ်သည်။) တောင်ကြာပန်းပုံလေး ကူးယူသွားပါသည်။ ပန်းအိုးထိုးခွင့်ရမည်ဆိုလျှင်အတိုင်းထက်အလွန်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ခင်တဲ့
eipu says: တခါမှမမြင်ဘူးဘူး။
စိန်ဗိုက်ဗိုက် says: ဟုတ်တယ်ဗျ..
ပလပ်စတစ် ပန်းတော့ ဟုတ်လောက်ပါဘူးနော်..
mamanoyar says: ပလပ်စတစ်ပန်းမဟုတ်ပါဘူး ဗိုက်ဗိုက်ရဲ့
တကယ့်ပန်းအစစ်တွေပါ နှီးဘုရားမှာ ရောင်းနေတာတွေ့လို့